WordPress Biko iyo Njikọ Na-abata | Martech Zone
WordPress Biko iyo Njikọ Na-abata
Otherbọchị gara aga ekwuru m na post Robert Scoble, Ndepụta mgbochi obodo. Ọ bụ nnukwu post na usoro nke ngwaọrụ dị ka Friendfeed iji gbalịa ịkwalite iso n'etiti ndị otu. Na mpụga nke ndepụta nke dakọtara na mmekọrịta gị ugbu a (dịka kọntaktị email gị), echere m na ngwaọrụ ndị a na-eme ka ike ịkparịta ụka n'socialntanet ghara ịdị egwu.
O zuuru nke ahụ, n'agbanyeghị. Nyaahụ ahụrụ m nke ahụ Robert Scoble gbakwunyere na njikọ m na-abata:
Ewezuga na ọ bụghị n'ezie Robert Scoble na-ekwuỌ bụ m kwuru na post Robert na-edebanye aha ugbu a dị ka njikọ m na saịtị m. Naanị… ọ bụghị n'ezie a ezi na-abata njikọ ebe ọ bụ na ọ nwetara nofollow jikọtara.
WordPress kwesiri iza njikọ ndị na-abata iji nye ndị ọrụ ohere ịhụ backlinks dị arọ na njikọ njikọ nofollow. Nke ahụ ga - eweta ụzọ dị mfe iji gbochie njikọ ndị a enweghị isi na dashboard m.
Tags: ahịa delivra emailVidio Ahịamisose Intelnyiwe seo
Akụkọ saịtị weebụ